merolagani - लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनलाई लाभांस घटाउनु पर्ने के आयो आपत ?
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनलाई लाभांस घटाउनु पर्ने के आयो आपत ?
Nov 04, 2018 Merolagani
हतारिएर सेयर बेच्नेलाई घाटा धेरै
आइतबार सेयर बजार खुल्दै गर्दा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको लाभांस २४ प्रतिशतले घटेको सूचना बाहिरियो । जसका कारण कम्पनीको सेयर मूल्य छिनभरमा नै तिब्र गतिमा तल झर्यो । इन्स्योरेन्सले बीमा समितिको निर्देशन अनुसार प्राविधिक कारणले प्रस्तावित लाभांस घटाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३ ७४ को कमाईबाट कम्पनीले ३६ प्रतिशत बोनस तथा १.८९ प्रतिशत नगद लाभांस बितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
उल्लेखित आर्थिक वर्षको बीमांकीय मूल्यांकन स्वीकृत भए पछि सोही आधारमा कम्पनीले लाभांस प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त लाभांस प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पठाइएको थियो । तर बीमा समितिले एलआईसीको दायित्व अर्थात प्रोभिजनको आकार सानो भएको भन्दै लाभांस घटाएर प्रोभिजनको आकार बढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले एलआईसीलाई यस सम्बन्धमा कत्तिक ६ गते पत्राचार गरेको थियो ।
बीमा समितिको पत्र पाए पछि शनिबार बसेको एलआईसी सञ्चालक समितिको बैठकले पहिले प्रस्तावित लाभांसलाई घटाएर १२ प्रतिशत बोनस तथा ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांस बितरण गर्ने परिमार्जित प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो ।
बीमा समितिले ताके अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब रुपैंया चुक्ता पूँजी बनाउनु पर्नेमा त्यो समय आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ । सोही अनुसार बीमा कम्पनीहरु चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने ध्याउन्नमा छन् ।
अहिले प्रस्तावित लाभांस बितरण गर्दा एलआईसीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४९ करोड रुपैंया मात्र हुन्छ । पुस मसान्तसम्ममा एलआईसीले २ अर्ब रुपैंया चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि उसले गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट यहि पुस मसान्तसम्ममा कम्तीमा पनि ३५ प्रतिशत बोनस बितरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस आधारमा आइतबार हतारिएर एलआईसीको सेयर बेच्नेहरुलाई घाटा भएको छ ।